Maxay tahay halista ku iman karta Soomaaliya ee dowlada Mareykanka ay ka digtay? - Caasimada Online
Home Warar Maxay tahay halista ku iman karta Soomaaliya ee dowlada Mareykanka ay ka...
Maxay tahay halista ku iman karta Soomaaliya ee dowlada Mareykanka ay ka digtay?
Washington (Caasimada Online) – Sirdoonka qaranka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday inay jirto cabsi ay ka qabaan khatar aragagixso oo uga imaan karto dalal ay ku jirto Somalia, balse waxaan warbixinta lagu sheegay in cabsida koowaad ay tahay kooxda ISIS ee Afgaanistaan.
Avril Hanes oo agaasimaha sirdoonka Qaranka Maraykanka ayaa hadalkan ka sheegtay shirka sanadlaha ah ee amniga iyo sirdoonka ee 2021 oo lagu qabtay Washington DC.
Agaasimaha oo alaadda fogaan araggga uga qeyb-gashay shirkaasi ayaa sidoo kale shaacisay magacyada dalalkaasi, waxayna kala yihiin Somalia, Yemen, Syria iyo Iraq
“Cabsida ugu sareysa ee Argagixisada ee Xilliga ma aha dalka Afganistan, balse waxaan aad u arkaa inay Khatarta ka soo fool leedahay dalalka Somalia, Yemen, Syria, Iraq iyo Kooxda Daacish,” ayey tiri Avril Hanes agaasimaha sirdoonka qaranka dalka Mareykanka.
Sidoo kale waxa ay intaasi ku dartay in ka dowlad ahaan ay si gaar ah isha ugu hayaan afartaasi dal, si looga looga hortego halista kooxaha argagixisada.
Ugu dambeyn Avril Hanes ayaa sheegtay inay si aad ah ula socon doonaan dhaq-dhaqaaqa kooxda Daacish-ta Afgaanistaan, si looga hor istaago ulinta weeraro horleh oo ay geysato.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyadoo horey Daacish ay u sheegatay weeraro qaraxyo ah oo lagu qaaday ciidamada Mareykanka, ka hor inta aysan ka bixin garoonka Kabul.
Si kastaba, Soomaaliya ayaa marka la’eego Mareykanka waxa uu ka fuliyaa howl-gallo iyo duqeymo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanka gudaha dalkeena.